Piraty mahatsikaiky homena amin'ny fety - Asa tanana mahafinaritra | Asa tanana
Piraty mahatsikaiky omena amin'ny fety
Alicia tomero | 10/07/2021 14:30 | asa-tanana, Asa-tanana ho an'ny ankizy, fanodinana
Ireny jiolahin-tsambo ireny dia hevitra tonga lafatra hanome fanomezana manokana amin'ny hetsika na fety iray. Vitsy ihany no ilainao hazo vita tapa-kazo, baoritra mainty sy vola madinika sôkôla mba ho anisan'izany fanomezana manokana ho an'ny ankizy. Izy io dia asa-tanana mora azo iaraha-miasa amin'ireo ankizy kely, saingy amin'ny fitandremana tsara mba tsy ho simba amin'ny hafanan'ny silôtika. Ianao koa dia manana horonantsary fampisehoana hahitanao azy tsikelikely.
1 Ireo fitaovana nampiasako ho an'ireo piraty roa:
2 Dingana voalohany:
3 Dingana faharoa:
4 Dingana fahatelo:
5 Dingana fahefatra:
6 Dingana fahadimy:
7 Dingana fahenina:
Ireo fitaovana nampiasako ho an'ireo piraty roa:
Tehina hazo 10
Maso lehibe 2 ho an'ny asa-tanana
Tipex fotsy na penina marika fotsy
Silika mafana sy ny basiny
Azonao jerena tsikelikely ity asa tanana ity amin'ity video manaraka ity:
Maka tehina efatra izahay ary apetraka miaraka ary mifanaraka. Notapahinay tamin'ny antsasaky ny tehina iray hafa ary ampiasainay afaka miditra ao amin'ireo tehina 4 hafa. Hampiasainay ny silikôla hahafahana mifikitra aminy ary hampiasa tapa-kazo tsirairay izahay isaky ny tendrony hazo.
Apetrantsika eo ambonin'ireo kibay ny baoritra mainty mba hahafahana mandrefy sy manandrana manao kofehy mainty lehibe tokony ho 2 sm ny haavony. Manao kofehy 2 izahay ary manapaka. Apetrantsika eo ambonin'ilay baoritra ilay andalana ary averinay miaraka amin'ny kompà ny endrika boribory eo an-tampon'ny satroka. Mba hanondroana kokoa ny endrika boribory dia hosoratantsika amin'ny sisiny mihidy kokoa ny sisin'ny faribolana ary hanapaka tarehimarika roa isika.
Mametaka ireo ampahany izahay ny satroka fa nesorinay ny kaody mainty. Hametraka isika ny maso plastika amin'ny lafiny iray amin'ny tarehy ary amin'ny pensilihazo no hanoratantsika ny vongan'ilay maso hafa, ny fehin'ny patch, orona ary vava.
Miaraka amin'ny marika mainty Izahay dia manisy marika sy manao sary ny ampahany izay mainty ary nolokoinay tamin'ny penina: ny mason'ny maso sy ny orona. Mandeha am-bava miaraka amin'ny mena marika.
Raisinay ny Vola sôkôla ary apetrakay amin'ny silipo eo amin'ny faritra ambany amin'ny endrik'ilay piraty izany. Raisinay ny marika fotsy na tendrony tampony ary amin'ny tapany ambony amin'ny satroka dia hosintonina amin'ny endrik'ireo karandoha ireo taolana.
Manao pensilihazo izahay ny sandry eo amin'ny baoritra mainty. Nanapaka azy ireo izahay ary nampifanaraka azy ireo tamin'ny farantsakely niaraka tamin'ny fahatsapana namihina azy ireo. Izahay dia miraikitra amin'ny silika mafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Piraty mahatsikaiky omena amin'ny fety
Origami 5 hatao amin'ny taratasy fidiovana ary gaga
Làlana ahitra ho an'ny dobo filomanosana